Mwari Anokoka Vanhu Kumabiko | Upenyu hwaJesu
CHIDZIDZO PANYAYA YEKUZVININIPISA
VANHU VAKOKWA KUMABIKO VANOPA TUZVIKONZERO TWOKUSAVAPO
Jesu achiri mumba memuFarisi amukoka uye achangobva kurapa murume aiva nerukandwe. Jesu anoona kuti vamwe vakokwa vari kusarudza nzvimbo dzepamusorosoro dzekugara, uye anobva atora mukana wacho kuti adzidzise nezvekuzvininipisa.
Jesu anoti: “Kana wakokwa nomumwe munhu kumutambo womuchato, usatsenhama panzvimbo yepamusorosoro. Zvimwe mumwe munhu anokudzwa kupfuura iwe angava akakokwa naye panguva iyoyo, zvino iye akakukoka pamwe chete nomumwe wacho, achauya oti kwauri, ‘Rega munhu uyu agare nzvimbo yacho.’ Iwe uchabva waenda kunogara panzvimbo yakadereresa uchinyara.”—Ruka 14:8, 9.
Jesu anoenderera mberi achiti: “Asi kana wakokwa, enda utsenhame panzvimbo yakadereresa, kuti kana munhu akakukoka akauya ati kwauri, ‘Shamwari, enda pakakwirira.’ Uchabva wakudzwa pamberi pevamwe vaeni vose vakakokwa pamwe chete newe.” Iyi haisi nyaya yekungova netsika dzakanaka. Jesu anotsanangura kuti: “Nokuti munhu wose anozvikwidziridza achaninipiswa uye uya anozvininipisa achakwidziridzwa.” (Ruka 14:10, 11) Saka apa Jesu ari kukurudzira vateereri vake kuti vazvininipise.
Jesu anobva ataura mashoko anopa muFarisi amukoka chidzidzo chokuti mabiko anofarirwa naMwari anofanira kunge akaita sei. “Paunogadzira kudya kwemasikati kana kudya kwemanheru, usashevedza shamwari dzako kana vanun’una vako kana hama dzako kana vavakidzani vakapfuma. Zvichida imwe nguva vangazokukokawo . . . uye zvichava muripo kwauri. Asi kana waita mabiko, koka varombo, mhetamakumbo, vanokamhina, mapofu; uye uchafara, nokuti havana chinhu chokukuripa nacho.”—Ruka 14:12-14.
Zvingori matiri kuti patinoita mabiko tinowanzokoka hama, shamwari, nevavakidzani, uye Jesu haasi kuti izvozvo zvakaipa. Asi ari kutaura kuti kukoka vanhu vanoshaiwa, vakadai sevarombo, zvirema, kana kuti mapofu kunoita kuti munhu akomborerwe. Jesu anotsanangurira muFarisi amukoka kuti: “Ucharipwa pakumuka kwevakarurama.” Mumwe akokwa anobvumirana nazvo oti: “Anofara anodya zvokudya muumambo hwaMwari.” (Ruka 14:15) Anoona kuti ichi chikomborero chaicho. Asi havasi vose vanoona saizvozvo, sezvinozobuda mumufananidzo unotaurwa naJesu:
“Mumwe murume akanga achigadzirira kudya kwemanheru kukuru, uye akakoka vazhinji. Zvino akatuma muranda wake . . . kunoti kune vaya vakakokwa, ‘Uyai, nokuti zvinhu zvagadzirwa zvino.’ Asi vose zvavo vakatanga kukumbira kuti vasavapo. Wokutanga akati kwaari, ‘Ndakatenga munda uye ndinoda kuenda kunouona; ndinokukumbira kuti, Ngaandiregererewo.’ Mumwe akati, ‘Ndakatenga zvipani zvishanu zvemombe uye ndiri kuenda kunodziedza; ndinokukumbira kuti, Ngaandiregererewo.’ Mumwezve akati, ‘Ndichangobva kuroora mudzimai saka handigoni kuuya.’”—Ruka 14:16-20.
Zvikonzero izvozvo hazvina kana nemusoro! Munhu anowanzotanga aongorora munda kana kuti zvipfuwo asati atenga, saka kana atotenga hapasisina chekumhanyira. Murume wechitatu haasi kugadzirira kuroora. Akatoroora kare, saka izvozvo hazvingamutadzise kuenda kumabiko anokosha aakokwa. Paanonzwa tuzvikunzero utwu, tenzi wacho anogumbuka oudza muranda wake kuti:
“Kurumidza kuenda mumigwagwa yakafara nenzira dzomuguta, uunze muno varombo nemhetamakumbo nemapofu nevanokamhina.” Muranda uyu anoita izvi, asi nzvimbo ichirimo. Saka tenzi wacho anoudza muranda uyu kuti: “Buda upinde mumigwagwa nenzvimbo dzakatenderedzwa noruzhowa, uvagombedzere kuti vapinde, kuti imba yangu izare. Nokuti ndinoti kwamuri, Hapana kana mumwe chete wevanhu ivavo vakanga vakakokwa acharavira kudya kwangu kwemanheru.”—Ruka 14:21-24.
Zvichangobva kutaurwa naJesu zvinonyatsoratidza zvakaitwa naJehovha Mwari paakaita kuti Jesu Kristu akoke vanhu kuti vazovawo muUmambo hwekumatenga. VaJudha, kunyanyanyanya vatungamiriri vechitendero ndivo vakatanga kukokwa. Pamakore ose oushumiri hwaJesu, vakawanda vavo vakaramba kukokwa. Asi havasirivo chete vaizokokwa. Jesu ari kuratidza zviri pachena kuti mune ramangwana vaJudha vaitarisirwa pasi uye vemamwe marudzi vakatendeukira kuchiJudha, vachakokwawo. Zvadaro vanhu vaionekwa nevaJudha sekuti havakodzere pamberi paMwari vaizokokwawo.—Mabasa 10:28-48.
Zviri kutaurwa naJesu zvinonyatsoenderana nezvataurwa nemumwe akokwawo kumba kwemuFarisi kuti azodya paati: “Anofara anodya zvokudya muumambo hwaMwari.”
Jesu anotaura mufananidzo upi kuti ape chidzidzo chekuzvininipisa?
Munhu anokoka vanhu kumabiko anofanira kuita sei kuti mabiko ake afarirwe naMwari, uye sei izvozvo zvichizoita kuti afare?
Ipfungwa ipi iri kutaurwa naJesu mumufananidzo wake wemabiko ezvokudya zvemanheru?